अमेरिकामा कलेजो प्रत्यारोपण गरिरहेका डा. रोशन
साउन ३२, २०७४ बुधवार १५:०४:०० प्रकाशित
डा. रोशन श्रेष्ठ हाल अमेरिकाको जर्जियास्थित पिडमन्ट ट्रान्सप्लान्ट इन्स्टिच्युटमा लिभर ट्रान्सप्लान्टेसनका मेडिकल डाइरेक्टरका रुपमा कार्यरत छन् । सन् २००५ देखि हालसम्म उक्त इन्स्टिच्युटमा भएका करिब एक हजार कलेजो प्रत्यारोपणमा उनी सक्रिय रुपमा सहभागी भएका छन्। उनी कलेजो प्रत्यारोपण फिजिसियन हुन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले पनि यही वर्ष कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्न लागेको छ । प्रत्यारोपणको तयारी अगाडि बढिरहँदा कलेजो प्रत्यारोपणका विषयमा काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्न र प्रत्यारोपणका लागि सहयोग गर्न डा. रोशन अमेरिकाबाट नेपाल आएका थिए । सोही क्रममा उनले अमेरिका यात्रा र कलेजो प्रत्यारोपणका क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव स्वास्थ्यखबरका प्रवीण ढकाललाई यसरी सुनाए :
मेरो जन्मघर धनकुटाको बुधबारे–६ भए पनि म धरानमा हुर्किएँ । विद्यालय शिक्षा धरानकै डिपो हाइस्कुलबाट हासिल गरेको हुँ । त्यहाँ धेरैजसो ब्रिटिस आर्मीका छोराछोरी पढ्छन् । तर, मेरो बुवा ब्रिटिस आर्मीमा हुनुहुन्नथ्यो । मेरी दिदी त्यहाँकी शिक्षिका भएकाले मैले पढ्ने अवसर पाएको थिएँ।
एसएलसी पास भएपछि म विज्ञान पढ्न काठमाडौं आएँ । त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट आइएस्सी सकेपछि एमबिबिएस अध्ययनका लागि म बंगलादेश गएँ । बंगलादेशमा युनिभर्सिटी अफ ढाकाबाट एमबिबिएस पूरा गरेँ । एमबिबिएस सकेपछि विज्ञ डाक्टर बन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसपछि थप अध्ययनका लागि अमेरिका गएको हुँ।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको पढाइ जहाँ पनि कठिन नै हुन्छ । आवासीय चिकित्सकका रुपमा चौबीसै घण्टा अस्पतालमा खटिनुपर्ने हुन्छ । मैले पनि त्यही अनुसार मिहिनेत गरेँ । अमेरिकामा गएलगत्तै सेन्टलोस अस्पतालमा इन्टरनल मेडिसिन अध्ययन गरेँ । पढाइ पूरा गरेर म त्यहाँ एक वर्ष चिफ रेजिडेन्टका रुपमा छनोट भएँ र त्यसलगत्तै युनिभर्सिटी अफ कोलोराडोमा ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी र हेपाटोलोजीमा फेलोसिपको अवसर पाएँ । त्यसपछि मैले जुनियर फ्याकल्टीका रुपमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर अफ मेडिसिनका रुपमा युनिभर्सिटी अफ कोलोराडोमा जागिर खाएँ।
काम गर्ने क्रममा मलाई ट्रान्सप्लान्ट हेपाटोलोजीमा विशेषज्ञता हासिल गर्न इच्छा जाग्यो । युनिभर्सिर्टी अफ कोलोराडोमा मैले कलेजो रोग प्रत्यारोपण फिजिसियनका रुपमा काम गरेँ । त्यही समयमा थेरोपेटिक इन्डोस्कोपी तालिम लिने मौका पनि मिल्यो ।
सन् १९९८ देखि युनिभर्सिटी अफ नर्थ क्यारोलोनामा निर्देशकका रुपमा सेवा सुरु गरेँ । सन् २००५ सम्म त्यहाँ काम गरेपछि जर्जियास्थित पिडमन्ट ट्रान्सप्लान्ट इन्स्टिच्युटमा काम गर्न थालेँ । पिडमन्टमा हालसम्म पनि कार्यरत छु । सन् २००५ मा पिडमन्टमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्न म लगायतको टोली सक्रिय रुपमा लागेका थियौं । त्यसयता हालसम्म त्यहाँ करिब एक हजार कलेजोको प्रत्यारोपण भैसकेको छ।
कलेजो प्रत्यारोपण निकै जटिल कार्य हो । यो कार्य कुनै एक चिकित्सकले मात्र गर्न सक्दैन । यसका लागि पूरै टिम चाहिन्छ । मैले जीवनमा कलेजो प्रत्यारोपण गरेको पहिलो पटक देखेको सन् १९९२ मा हो । त्यसबेला म युनिभर्सिटी अफ कोलोराडोमा पहिलो वर्ष अध्ययन गर्दै थिएँ । विश्वमा पहिलो पटक सन् १९६३ मा कलेजो प्रत्यारोपण भएको मलाई थाहा भएकाले मलाई त्यसबारे निकै जिज्ञासा थियो । त्यही भएर अध्ययनका क्रममा मैले त्यहाँ कलेजो प्रत्यारोपण गरेको निकै चाख दिएर हेरेँ।
नेपालमा पनि कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु भएकोमा निकै खुसी लागेको छ । भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा प्रत्यारोपण सेवा पाइन्छ । अब छिटै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु हुन लागेको छ । यहाँ प्रत्यारोपण सुरु गर्न म सक्दो सहयोग गर्नेछु।
शिक्षण अस्पताल भएकाले यहाँको पूर्वाधार निकै राम्रो छ र कलेजो प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक सबै टिम पनि रहेछ । जनशक्तिका हिसाबले शिक्षण अस्पतालमा डा. रमेश भण्डारीसहितको केही गरौं भन्ने चुस्त र दक्ष टिम छ। मैले अमेरिकामा कलेजो प्रत्यारोपणका क्रममा आफूले जानेका सीप र अनुभव उहाँहरुसँग बाँडिरहेको छु।
१. ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै प्रदेश सरकार
२. एन्टिबायोटिक्सको दुरुपयोग रोक्न जनचेतना आवश्यक : स्वास्थ्यमन्त्री यादव
३. यस्तो छ तुलसीको औषधीय महत्व
४. डा पुष्पा चौधरीका पक्षमा जारी अन्तरिम आदेश खारेज गर्न सर्वोच्चमा सरकारको निवेदन (पूर्ण पाठ)
५. महोत्तरी: मर्मतको अभावमा थन्कियो एम्बुलेन्स
६. यी हुन् स्वास्थ्य सेवा विभागले सरुवा गरेका १७० नर्सहरु
७. स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको भन्दै बुटवल, तुल्सीपुर र घोराहीमा हर्न निषेध
८. डा केसी सीसीयूमा
९. समस्यामा स्वास्थ्य– २ : स्थानीय तहबाट बजेट मागेर केन्द्रबाटै औषधि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था
१०. डा केसी अस्वस्थ, बिहान ४ बजेदेखि अस्पताल भर्ना
१. आयुर्वेद विभाग अन्तर्गतका २ सय ५ कर्मचारीको सरुवा (नामसहित)
२. यी हुन् स्वास्थ्य सेवा विभागले सरुवा गरेका १७० नर्सहरु
३. टिचिङको निर्देशकका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस, निजीमा काम नगर्ने सर्त
४. क्षमता भएका गुमनाम डाक्टरलाई विश्वास नगर्ने, चर्चामा आएकाको पछाडि कहिलेसम्म दौडिने?
५. एसोसिएसन अफ स्पाइन सर्जन्समा नयाँ कार्यसमिति